August 1, 2011 – democracy for burma
Tak Governor cranks up the pressure on Burmese refugees
On August 1, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Mr Samart Loifah, the governor of Tak Province, sent shockwaves through the Burmese refugee camps when he told reporters earlier this week that Thai authorities had been discussing with Burmese officials the possibility of closing the border camps.
The Bridge without traveling after close (Photo-KIC stringer)
Mr. Loifah also speculated that Thai authorities would target Burmese pro-democracy opposition groups living on the Thai side of the border.
Mr Loifah’s statements were made after meetings were held between the two countries in an attempt to reopen the Mae Sot border crossing.
Burmese officials closed the Mae Sot Friendship Bridge in July 2010 in what many international and regional security analysts claim was an attempt to put the squeeze on local Mae Sot businesses to pressure the Thai government to crack down on pro-democracy groups based on the border. Continue reading “Tak Governor cranks up the pressure on Burmese refugees” →
The gold winner boy Mg Thaund De (SHAN) can’t apply for Thai citizenship
Gold winner Mg Thaund De’s father said that his son did not have the chance to apply for Thai citizenship.
On the 14th of July, the Thai government registered students below 15 years in Chaingmai, however, Mg Thaund De was left out. “This program is only for t Thai people who hold the so-called ThoRo card. Unfortunately, this does not apply for hill people and migrant workers”, said by Sai Ni from MAP foundation serving migrant workers. Many children coming from migrant parents do not have neitheraThai nor Burmese ID, which is also true for Mg Thaund De.
Mg Thund De performed at international paper airplane contest and won the gold prize and third prize on behalf of Thailand in 2009, Japan. At that time, Thai Prime minister Abhisit Vejjajiva promised to support Mg Thaund De till the end of his high school education.
Mg Thaund De’s parents are now worry about for their son’s education since he does not holdaThai ID card. His father explained that his son wants to becomeaScience Industry engineer. If the Thai government doesn’t support his son’s education he will not be able to continue higher education.
U Aung Myo Min, human right education director, said that without Thai ID card it is impossible to pursue higher education neither to vote.
Mg Thaund De was born in 1997 in Thailand, Chaingmai, WhiSia section. His parents are U Sai Nyut and Daw Mon from Burma, Shan state. Mg Thaund De strongly hopes that he will receive the Thai ID card one day.
7 out of 14 government battalions surrounding Wanhai, the headquarters of the Shan State Progressive Party (SSPP), have withdrawn
Chiang Mai (Mizzima) – Seven out of 14 government battalions surrounding Wanhai, the headquarters of the Shan State Progressive Party (SSPP), have withdrawn, said SSPP spokesman Major Sai Hla.
Since Thursday, the seven battalions have pulled out coinciding with the reassignment of the Tactical Operation commander who was based in Kyethi Township, 18 miles from SSPP headquarters. He was reassigned to Regional Command, Major Sai Hla said. Currently, the remaining seven Burmese battalions are positioned three miles southeast and five miles west of Wanhai headquarters.
He said the reason for the troop withdrawal was not clear. It may beatemporary withdrawal designed to send back their depleted forces. SSPP sources said that during the 18-day government offensive that started on July 11, 100 government soldiers were killed, about 200 were injured and more than 50 deserted.
Because of the fighting,atotal of 13 primary schools,acharity school andahigh school from 20 affected villages in the area were closed. More than 1,000 students cannot attend schools and are taking refuge at safe locations.
On July 25, government officers sent two Buddhist monks, who are residents in the area, to Wanhai headquarters to mediateacease-fire, but the SSPP rejected the offer, saying it was not serious.
The SSPP and the Kachin Independence Organization have both said that they wantanationwide cease-fire rather that separate cease-fire agreements with each armed ethnic group.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာပေါ် NLD အမတ်ဟောင်း ဒူဝါဇော်အောင် ဝေဖန်
NLD ပါတီ၏ ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒူဝါ မရန်ဇော်အောင်
အမြန်ဆုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဗမာအစိုးရအား အဓိက ထား တိုက်တွန်းသင့်သည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၊ ကချင်အမတ်ဟောင်း ဒူဝါ မရန်ဇော်အောင် (Maran Zau Awng)မှ ဝေဖန်လိုက်သည်။
“အဖြစ်အပျက်ရဲ့ အဓိက ဗမာအစိုးရ ဟုတ်တယ်။ အစိုးရကို ပြောရမယ်။ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြောစရာမလိုဘူး။ အစိုးရကို ပဲ နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ပါလို့ ပြောရမယ်။ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတာ။ ကျနော်တို့ဟာ ဗမာနဲ့အတူတူပဲ။ ဗမာပြည်ထဲမှာ ကပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။”
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် လိပ်မူထားသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တို့သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် ဖြစ်နေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများကြား တန်းတူညီမျှမှု မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်ဟု သူဆိုသည်။
“ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းအားလုံးက ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်နေနေတာ။ ပျားအုံလိုအေးဆေးနေနေတာ။ သူက လိုက်လျှောက် တုတ်ထိုးတာကိုး။ ထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် မတတ်နိုင်လို့ ပြန်တိုက်ကြတာ။”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများကြား နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှမှုမရှိပဲ ဗမာတစ်မျိုးသာ ဆက်လက် နိုင်ငံတော်အာဏာဆုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကချင်နှင့် တခြား ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ထင်မြင်ထားပါသည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိရမည်ဟု ပြဋ္ဌါန်းကာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်သည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအား ဗမာစစ်တပ်က နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းစေသည်။
ငြင်းဆန်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဗမာစစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင်ရာမှ ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်များတွင် ပြည်တွင်းစစ် ပြန်ဖြစ်လာသည်။
“သူတို့(ဗမာအစိုးရ)စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ မနေဘူး။ ကျနော်တို့မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ရ ရမယ်။ သူတို့ကိုလည်း မတိုက်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကိုလည်း မဖိနှိပ်နဲ့။” ဟု ဒူဝါဇော်အောင် ပြောဆိုသွားပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဒူဝါဇော်အောင်သည် NLD ပါတီ၏ ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဖြစ်ပြီး ယခု အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သည်။
KHRG:Shelling in Myawaddy Town -Update No.83: July 30th 2011 – 7:30 pm
Andrew Marshall calls for blogs, social media to discuss thaistory and Thai cables
On August 1, 2011 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
1. I put cables online asaresource for all. I don’t own the #thaistory cables, I am just the last link inachain of people who got them from secret US servers to the public domain. Everyone should feel free to repost #thaistory cables on your own sites, discuss them, analyse them, etc. They are an open resource.
2. Those in Thailand for whom commenting on some #thaistory cables is highly dangerous will still find many others that are safe to discuss. I would urge everyone to use blogs and social media to discuss & share the #thaistory cables. They can greatly aid our knowledge of Thailand. If Thai (and most international) media want to pretend #thaistory cables don’t exist, it’s up to us in the wired world to show otherwise. If the mainstream media fails in its duty to report #thaistory cables, it isagreat opportunity for blogs and social media to do the job. So please treat #thaistory cables as an open shared resource. All I ask is that you’re careful & responsible. Over to you. Best wishes.
Andrew Marshall, July 10
Note to readers: Feel free to comment or submit posts to thaistoryblog.
Interview Naing Han Tha the general secretary of the United Nationalities Federal Council (UNFC). egl.
နယ်ခြားစောင့် ၁၀ဦး KNLA တပ်မဟာ(၇)ထံ လာရောက် ပူးပေါင်း
ဇူလိုင်လ ၂၉ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် နယ်စပ်တနေရာတွင် အခြေစိုက်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦးသည် ယမန်နေ့က ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ(၇)ထံသို့ လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
နယ်ခြားစောင့်(၁၀၁၂)တပ်ရင်း၊ တပ်ခွဲ(၁)မှ တပ်ကြပ်ကြီး စောဒီ့ကျူ ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦးသည် နယ်ခြားစောင့်အနေ ဖြင့် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုစိတ် မရှိတော့သောကြောင့် KNLA နှင့် ယခုလို လာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း စောဒီ့ကျူက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေကို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ဒီအစိုးရလက်အောက်မှာ မလုပ်ချင်တော့လို့ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းတာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ဘိလည်း အစိုးရကို ပြန်တော်လှန်နေပြီလေ။ ဒါ ကြောင့် ကျနော်တို့လည်း တပ်ရင်းမှူးနဲ့အတူ အစိုးရကို ပြန်တော်လှန်ဖို့ ဒီလိုလုပ်တာပါ။”ဟု စောဒီ့ကျူက ပြောသည်။
အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦးမှာ တပ်ကြပ်ကြီး ဒီ့ကျူ ၅၀နှစ်၊ ဒုတပ်ကြပ် ဖားဆွဲ့ ၄၀နှစ်၊ တပ်ကြပ် ဖားနို ၂၃နှစ်နှင့် တပ်သားများဖြစ်သည့် ဒီ့တို ၂၁နှစ်၊ ဖောကလူ ၁၉နှစ်၊ ဒီ့ကွီ ၁၈နှစ်၊ ဒို့ဝါး ၁၇နှစ်၊ တာ့ဘလယ့် ၁၆နှစ်၊ အယ်ခူ ၁၅နှစ်၊ မောင် သန်း ၁၃နှစ်တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်အတူ AR ၆လက်၊ မက္ကဇင်း ၂၄ချပ်၊ AR စက်လတ် ၁လက်၊ မက္ကဇင်း ၁ချပ်၊ 79 ၁လက်၊ ကျည် ၂၀လုံး၊ AK ၁လက်၊ မက္ကဇင်း ၂ချပ်၊ အီကွင့်မန့် ၅စုံ၊ စကားပြောစက် ၂လုံး ပါရှိသည်။
ကေအဲန်အယ်လ်အေနှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းသည့် အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အစိုးရအား ပြန်လည် တော် လှန်ခုခံရန် အလွန် စိတ်အားထက်သန်လျှက်ရှိသည်ဟု ပြောသည်။
တပ်သားဒီ့တိုက “ဒီမှာ တရက်နှစ်ရက်နေပြီးရင် ခေါင်းဆောင်တွေ ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ဘိဆီကို ပြန်သွားပြီး အစိုးရစစ်တပ်ကို ပြန်တိုက်မယ်။ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေကို ခံနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့တွေ အားလုံး ပြင်ဆင်ထား တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။ Continue reading “နယ်ခြားစောင့် ၁၀ဦး KNLA တပ်မဟာ(၇)ထံ လာရောက် ပူးပေါင်း” →
Test Thein Sein government with mass rally
MONDAY, 01 AUGUST 2011 10:40 SHANONYMOUS
After going through your latest opinion piece, “Burma’s ethnic conflict product of flawed constitution”, one couldn’t resist the urge to question, “Where do we go from here?”
To put it differently, “How are we going to make the military-backed, government of Burma in civilian garb accept the amendment or rewrite the constitution to benefit all the people of Burma?”?
Generally, it will be an uphill battle to change the Burmese military leadership way of thinking. For the 2008 Constitution is seen as manifesto for the military of having the sole right to rule over the civilian population.
Seen from this perspective, the will to change or political will from the part of the military leadership could be said as non-existence.
But our problem is to turn the military around, so that it will become more accommodative vis-à-vis the oppressed people of Burma.
The contemporary situation seems to be going in favour of the oppressed people, if we try to assess the unfolding scenarios.
The following points are positive, inasense, that we could use it to foster positive change in Burma.
The military-backed government’s wagging war on the Kachin, Shan, Karen ethnic nationalities are draining its financial resources, so much so that news of top ranking military personnel are tendering resignation, either due to under payment or simply because of meaningless war against the ethnic groups. Continue reading “Test Thein Sein government with mass rally” →
Battle July 2011